Darawalada basaska oo diiday in ay faafiyaan xayaysiinta SD | Somaliska
Xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) ayaa bilaabaya olole ay xayeysiin ku samaynayaan basaska dadweynaha ee dhowr magaalo oo ay ku jidho Stockholm. Xayaysiinta ayaa lagu qori doonaa basaska oo ay inta badan wadaan dad soo galooti ah.
Arintaas ayaa dhalisay in qaar ka mid ah wadayaasha basaska ay diidaan in ay kexeeyaan basaska ay ku dhagantahay xayaysiinta SD. Qaar ka mid ah darawalada basaska ayaa wargeyska ETC u sheegay in aysan magaalada la wareegi doonin xayeysiinta SD.
“Waxaan ku fikirayaa in aan iraahdo Maya. Kuma fariisanayo bas nuucaas ah mana wadayo. Anigu waxaan ahay soo galooti, mana doonayo in aan magaalada la wareego fariinta nuucaas ah. Laakiin waxay noqonaysaa shaqo diid oo arintu waa mid u taala ururada shaqaalaha” ayay tiri Perihan Aydin oo ka mid ah wadayaasha basaska Stockholm.
Qaar badan oo ka mid ah wadayaasha basaska ayaa ka careysan in shirkada Keolis iyo SL ay aqbaleen in SD ay ku samayso xayeysiin basaska ay wadaan. SD ayaa la ogyahay in guud ahaan siyaasadooda ay ku dhisantahay naceybka soo galootiga, iyadoo ay noqonayso arin xun in adiga oo soo galooti ah aad xayeysiintooda faafiso.
kamaal daahir says:
August 18, 2014 at 16:25
Qofkasta kawarama sharciga AF ee gineva imisa ayuu kuqadanaya dhalashada wadanka ama medborgare
Qof hada laqabilay ee heysto ee looqabilay qaxotinimada gineva AF ma waxuu tirsanayaa 8sano mise waa shanso qofkii wax kayaqano arimahaas fadlan jwb nadiif ah ayaan kasugaya mahadsanidiin
hadeey wadaan basaska darawalada soo galootiga ayagoo xayeeysiinaa SD waa gacantaada isku qowrac. waa arin fiican hadiidaan darawalda
waxii rag ku dhaqaaqo rabina aqbalo waa rumooba says:
waar maxaan wadankeenii u dhisan laanahay ma qabyaalad ayaa intaa inaga soo reebtay, waar hal nin oo geesi ah oo somaliya oo somalida madaxa isku wada sara miyaa la wayey nimanyow dabadeed taariikhda gala oo taalo loo sameeyo. waxaasi oo dhib ahi waxay inoogu dhacayaan waa ilahay cibaadadiisi ayaan ka fogaanay ee ilahay haloo soo noqdo.
kamaal lambarkan wac ayaga kushegayo gorkaqadaneyso sharciga weyn 0771235235 wa migrationsverket Norrköping
Aniga leysiyay sharciga Af mudo laga jojogo 5 sano ka hor wana sharci iska cadi ah
Aniga ma fahmin waxa ad ka hadleysaan ma sharciga mise waa basaska in ladiido in ay wadaan soo galootiga basaska laguxayeeysiinaayo sd ama qolloyenka diidan soo galootiga
mida kale ma waxa la dha.hay dhalashado swidhen shansano aya lagu qaata cml ama wa riyo maalmeed